Ezaka fanitarana ny Fiangonana
20 Août 2006: Fankalazana ny 135 taona ny Fiangonana
Tanteraka ny Alahady 20 Aogositra lasa teo ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana hiderana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona faha 135 nitoriana ny Filazantsara teo amin’ny FJKM Tsimahandry (1871 – 2006).
Nitarika ny fotoana ny Mpitandrina Ramanantsoa Fely, ary ny Filohan’ny Antenimieran-doholona Rajemison Rakotomaharo kosa no nanatanteraka ny toriteny.
“Miakara any an-tendrombohitra, ka maka hazo ary ataovy ny trano, dia hankasitrahako izany sady hankalazaina Aho hoy Jehovah” (Hagay 1:8) no notoriana tamin’izany fanompoam-pivavahana izany.
posted by Tonia voalohany at 25.8.06
Ny Alahady 14 Mayno nanatanterahana ny voka-dehibe fanao isan-taona teto amin'ny FJKM Tsimahandry. Efa mihatsara ny toe-pahasalaman'ny Mpitandrina. Nanatrika ny fotoam-pivavahana niaraka tamin'ny fianakaviany ny tenany, ary nandray fitenenana izy ka nisaotra ny Fiangonana tamin'ny fanomezan-tanana tamin'ny nitsaboana azy.
Ny Mpitandrina Rakotoarimanana Haja Rolland no nitarika ny fotam-pivavahana tamin'ity Alahady nanatanterahan'ny Fiangonana ny voka-dehibe ity.
posted by Tonia voalohany at 16.5.06
16-02-2006: Paska 2006
Miarahaba antsika rehetra tratry ny Paska 2006.
Ao anatin'ny tsy fahasalamana ny Mpitandrina Ramanantsoa Fely, koa dia ny mpianatra pasitera avy ao amin'ny Faculté Ambatonakanga Rabemanantsoa no nisolo toerana azy, ary nitarika ny fanompoam-pivavahana teto amin'ny Fjkm Tsimahandry ny alahadin'ny Paska 2006 lasa teo.
Nisy ny fanangonana vola ho fanampiana ny mpitandrina ary mbola entanina avokoa ny mpiangona eto Tsimahandry mba hifanome tanana satria dia anjaran'ny Fiangonana no miantoka manontolo izay lany amin'ny fitsaboana ny mpitandrina ao aminy.
Tetsy andaniny ihnay koa dia noraisina amin'ny fomba ofisialy ireo varavarana telo vaovao - ny roa vita amin'ny voamboana, ary ny iray amin'ny vy - apetraka amin'ity trano fiangonana vao nitarina ity.
Mandroso hatrany izany ny asa fanitarana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola ezaka miandry ihany koa ny rihana, ny vali-tafo, ny tamboho, sns..., koa dia tsy nitsahatra nanentana hatrany ny filohan'ny fanitarana ho an'ireo malalatanana sy ireo izay tia hitondra ny anjara birikiny.
Ny fotoan-dehibe manaraka izay hanasana ny mpiangona manontolo sy ireo zanaka am-pihelezana rehetra tsy ankanavaka dia ny fanatanterahana ny Voka-dehibe izay atao ny alahady 14 mey ho avy izao. Vola 5 000 000 Ar na 25 000 000 fmg no ezahina hotratrarina amin'io fotoana io koa dia manentana antsika rehetra hanotrona izany fotoan-dehibe izany.
posted by Tonia voalohany at 19.4.06
19-02-2006: Fanombohana ny fankalazana ny faha 135 taonan'ny Fiangonana
Tanteraka ny Alahady faha 19 Febroary 2006 lasa teo ny fanombohana ny fankalazana ny faha 135 taonan'ny Fiangonana FJKM Tsimahandry ho an'ity taona 2006 ity.
Nentina nisantarana izany taom-pankalazana izany ary dia nisy ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny fanomezana avy tamin'ny fianakavian'i Andriamananjara Samuel, dia ny "carreaux" nentina nandrakofana ny faritra natokana ho an'ny mpiangona. Ny "carreaux" mandrakotra ny alitara kosa dia fianakaviana hafa no nanolotra izany.
Fotoan-dehibe tokoa ho an'ny fianakaviana Andriamananjara Samuel tokoa ity alahady ity satria dia notanterahana ihany koa ny fandraisana ny zafikeliny Njaranirina Sedera ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny Tompo.
Tanteraka izany izao ireo dingana roa voalohany amin'ny fanitarana ny Fiangonana (fametrahana ny fototra sy fananganana ny rendrina, ny fananganana ny alitara vaovao sy fametrahana ny carreaux). Mbola maro ny asa miandry, toy ny momba ny jiro, ny fitaratra, sy ny sisa, fa indrindra ny fananganana ireo rihana amin'ny andaniny roan'ny trano Fiangonana.
Nisaotra ireo malala-tanana sy ireo tsara sitra-po rehetra ny Filohan'ny Komity Fanitarana, ary mbola nanentana hatrany ho amin'ireo asa mbola miandry.
posted by Tonia voalohany at 3.3.06
05-02-2006 : Fametrahana ny carreaux
Faly miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona 2006.
Mitohy hatrany ny ezaka amin'ny fanamboarana ny trano Fiangonana vao nitarina.
Eo amin'ny fametrahana ny "carreaux" ny asa izao.
Ezahina ny ahavitana izany alohan'ny 19 febroary 2006, andro hanamarihana ny fanombohan'ny fankalazana ny faha 135 taonan'ny Fiangonana FJKM Tsimahandry ho an'ity taona 2006 ity.
posted by Tonia voalohany at 5.2.06
25-12-2005 : Krismasy
Tanteraka soa aman-tsara ny fanamby napetraky ny Komitin’ny Fanitarana teo ambany fitarian’ny Tompo.
Tao anatin’ny herinandro monja dia tontosa ny asa fanatanterahana ny asa vaventy momba ny alitara sy ny manodidina azy, ka nahafahan’ny kristianina teto Tsimahandry nankalaza ny Krismasy teto amin’ity trano Fiangonana vao nitarina ity.
Na maro aza ny tsy afaka noho ny asa aman-draharaha, satria moa fotoanan’ny fanetsana izao (sary: fitaomana ketsa valo andro) dia tsy vitsy no tonga nanohana ny antso tamin’ny asa niandry (dallage, fananganana alitara, fanadiovanan fandokona, fandravahana, sns…).
Kanto dia kanto raha ny hendrin’ny fiangonana vaovao. Toy ny isan-taona dia maro ny kristianina no tonga tety an-toerana ary tamin’ity taona ity dia tafiditra tao an-trano avokoa izy ireo.
Nisy ny fanaovana batisa voalohany teo amin’ny alitara vaovao.Alitara izay nokendrena indrindra mba hanaraka ny fenitra manan-kery eo anivon’ny FJKM.
posted by Tonia voalohany at 27.12.05
19-12-2005 : Asa anatiny
Vita soa aman-tsara ny fanafoana ny fanitarana ny trano fiangonana
Niroso tsy nisy hatak'andro tamin'ny asa manaraka ny tompon'andraikitra.
Natomboka ny fandrodanana ny alitara taloha sy ny fanamboarana ny atin'ny fiangonana vao nitarina.
Heverina ho vita alohan'ny Krismasy ny asa, ka hisokatra ho an'ny fotoam-pivavahana amin'ny 25 desambra ity ilany vao nitarina ity.
Izany no hovita dia nohon'ny fandraisana anjara mavitrika asehon'ny rehetra. Miandahy miambavy ireo tsara sitrapo amin'ny fanatanterahana ny asa.
Toy izao ny endriky ny alitara taloha izay horaiketin'ny tantara.
posted by Tonia voalohany at 20.12.05
20 Août 2006: Fankalazana ny 135 taona ny Fiangona...
19-02-2006: Fanombohana ny fankalazana ny faha 135...
11-12-2005 : Fetin'ny taranaka
07-12-2005 : Fametrahana ny tafo
26-11-2005 : Ezaka ataon'ny STK